Yemahara Software Foundation Inogashira $ 1 Mamirioni Bitcoins Mupiro | Linux Vakapindwa muropa
Kazhinji, Mahara Software mapurojekiti mapurojekiti anogamuchira mashoma zvipo kana ane mari shoma yekuita zvirongwa uye kugadzirisa kwavo. Muzviitiko zvakawanda, zvipo zvinotumirwa mazana mashoma emadhora ayo anoshanda zvinonzwisisika kuchengetedza icho chirongwa chipenyu kwemwedzi yakawanda.
Munguva pfupi yapfuura, Iyo Yemahara Software Foundation yakagamuchira mupiro worupo unosvika kumadhora miriyoni imwe. Iyo nhamba iyo iyo Foundation yakanga isati yambogamuchira, kunyangwe yayo yakareba uye inozivikanwa nhoroondo.
Asi chinonyanya kushamisa pamusoro penyaya hausi mupiro, izvo zvakakosha, asi nzira yekubhadhara: bitcoin. Iyo yakakurumbira mari yedhijitari pasi, zvakanyanya kunge US dhora, inoshandiswa zvakare neFree Software Foundation. Chaizvo, 91,45 bitcoins dzakapihwa, zvinosvika miriyoni imwe yemadhora mukutsinhana. Chipo chine rupo chakaitwa nechikwama chinonzi Chinanazi. Mari iyi iri kupa mipiro yakati wandei kumasangano asiri epfuma ane mari iri bitcoin. Nekudaro, homwe haingoitisi chiito chakanaka chete asi inosimudzirawo kushandiswa kwe bitcoin, iyo inofungidzira padivi, haina kana kana yakawanda seyakabhadharwa zvemagetsi kana mari yemuviri.
Iyo Yemahara Software Foundation dinozopa mari iyi kumapurojekiti eFree Software anoda mari, kwete kumapurojekiti ekare chete asiwo kumapurojekiti matsva. Zvakare nekuita akasiyana mapurojekiti mune iyo FSF inobatanidzwa.
Ini pachangu, ndinofunga kuti nhau dzakanakira Mahara Software, kwete chete nekuti akati wandei makuru mapurojekiti esoftware anosara, asi zvakare nekuti bitcoin inoiswa mukushandisa kwakanaka, mari ine mukurumbira uye ine gakava yakave nekusagadzikana kwakawanda nekuda kwekufungidzira kwayakange iinayo asi isina kumbobvira yabudirira pamashandisirwo ayo emari. tinovimba izvozvo Chinanazi ndiyo yekutanga fund kana investor wevazhinji vanosarudza kubheja pane Mahara Software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yemahara Software Foundation inogamuchira chipo chemamirioni gumi emadhora mumabitcoins